ဝက်သားလုံးအိအိလေးနဲ့ တမူထူးခြားတဲ့အရသာပေးစွမ်းနိုင်မယ့် ဝက်သားလုံးရှမ်းခေါက်ဆွဲ - For her Myanmar
ဝက်သားလုံးအိအိလေးနဲ့ တမူထူးခြားတဲ့အရသာပေးစွမ်းနိုင်မယ့် ဝက်သားလုံးရှမ်းခေါက်ဆွဲ
ရှမ်းခေါက်ဆွဲကို အသားနဲ့စားရတာ အားမရနိုင်သေးရင် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ မရိုးနိုင်တဲ့အစားအစာတွေ ချက်ပြုတ်စားသောက်ချင်တဲ့ အာသီသ ပြင်းပြနေပြီလား ယောင်းတို့ရေ.. ဒါဆိုရင်တော့ မင်မင်အခုဝေမျှပေးမယ့် အသားလုံးရှမ်းခေါက်ဆွဲ လုပ်နည်းလေးအတိုင်း လိုက်ချက်ကြည့်ရင်းနဲ့ အရသာသစ်တစ်မျိုးကို မြည်းစမ်းခံစားကြည့်ကြရအောင်နော်…
ကြာညှို့ ထမင်းစားဇွန်း (၃)ဇွန်း
ပဲပိစပ် ထမင်းစားဇွန်း (၂)ဇွန်း
ငံပြာရည် ထမင်းစားဇွန်း (၂)ဇွန်း
ဝက်သားလုံးရှမ်းခေါက်ဆွဲ ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ …
(၁) ရှမ်းခေါက်ဆွဲခြောက်ကို ရေစိမ်ထားပြီး ဝက်သားကို နုတ်နုတ်စင်းထားပါ။ မြေပဲဆံလေးတွေကို မညက်တညက် ထောင်းထားပါ။
Related Article >>> ခွန်အားပြည့်စေမယ့် ချင်းရိုးရာ ဆာဗူးသီးကို အိမ်မှာအလွယ်တကူ လုပ်စားနိုင်မယ့်နည်းလမ်း
(၂) ချင်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ၂မြွှာကိုရောထောင်းပြီး ကြက်သားမှုန့် ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဝက်ခန့် ထပ်ထည့်ကာ နုတ်နုတ်စင်းထားတဲ့ ဝက်သားသုံးပုံ နှစ်ပုံခန့်နဲ့ရောနယ်ပေးပါ။
(၃) ကြက်ဥတစ်လုံးကို ဝက်သားရောနယ်ထားတဲ့အထဲ ရောမွှေပြီး အနေတော်အလုံးလေးတွေလုံးပြီး ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ရေနွေးထဲထည့်ပြုတ်ပါ။ (၁၀)မိနစ်လောက်ပြုတ်ပြီးရင်တော့ အသားလုံးလေးတွေကို ဆယ်ယူထားလို့ရပါပြီ။
(၄) ဒယ်အိုးတစ်လုံးထဲမှာ ကြက်သွန်ဖြူနီ ၊ ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့်ရောထည့်ပြီး ဆီမွှေးသတ်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ခရမ်းချဉ်သီး(၈)စိတ် စိတ်ပြီးထည့်ပါ။
(၅) ခရမ်းချဉ်သီးအရည်မပျော်တပျော် အချိန်လောက်မှာ ဝက်သားသုံးပုံတစ်ပုံကိုထည့်ပြီး (၁၀)မိနစ်လောက်ချက်ပေးပါ။
(၆) (၁၀)မိနစ်ပြည့်တဲ့အခါ ပဲပိစပ်နဲ့ ငံပြာရည်ရောထည့်ပြီး ဝက်သားကောင်းကောင်းနူးတဲ့အထိ ချက်ပြီးရင်တော့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲအတွက် အနှစ်ရပါပြီ။
(၇) ရေစိမ်ထားတဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲဖတ်ကို တစ်ပွဲစာရေနွေးထဲထည့်ပြုတ်ပြီး အပျော့အမာ စိတ်တိုင်းကျပြီဆိုရင်တော့ ဇလုံတစ်ခုထဲကိုထည့်ပါ။
Related Article >>> မိုးအေးအေးထဲမှာ အာပူလျှာပူသုပ်ချဉ်ငံစပ်လေး လုပ်စားကြမယ်
(၈) အနှစ်ထမင်းစားဇွန်း(၁)ဇွန်း ၊ ကြာညှို့(၁)ဇွန်း ၊ မြေပဲဆံ(၁)ဇွန်း ၊ အချိုမှုန့်အနည်းငယ်ထည့်ပြီး ရှမ်းခေါက်ဆွဲအဖတ်တွေနဲ့ ရောမွှေပေးပါ။ အချိုအငံမျှတသွားပြီဆိုရင်တော့ ပြုတ်ထားတဲ့ ဝက်သားလုံးတွေ ပလုံစီအောင် စိတ်တိုင်းကျတင်ပြီး သုံးဆောင်လို့ရပါပြီနော်…
ဝက်သားလုံးလေးတွေကို ကိုက်ဝါးလိုက်လို့ ချိုမြတဲ့အရသာစိမ့်ထွက်လာချိန်မှာ ရှမ်းခေါက်ဆွဲလေး ရောစားလိုက်မယ်ဆိုရင် ပိုထူးကဲတဲ့အရသာကို တမြေ့မြေ့ခံစားရရှိနိုင်မှာပါ ယောင်းရေ… နောက်ထပ်လည်း ယောင်းတို့အကြိုက်နဲ့ ထပ်တူကျစေမယ့် အစားအစာလုပ်နည်းတွေကို ဝေမျှပေးဦးမှာမို့ ဆက်လက်စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးနော်…..
DiDi ( For Her Myanmar )
ရှမျးခေါကျဆှဲကို အသားနဲ့စားရတာ အားမရနိုငျသေးရငျ တဈနထေ့ကျတဈနေ့ မရိုးနိုငျတဲ့အစားအစာတှေ ခကျြပွုတျစားသောကျခငျြတဲ့ အာသီသ ပွငျးပွနပွေီလား ယောငျးတို့ရေ.. ဒါဆိုရငျတော့ မငျမငျအခုဝမြှေပေးမယျ့ အသားလုံးရှမျးခေါကျဆှဲ လုပျနညျးလေးအတိုငျး လိုကျခကျြကွညျ့ရငျးနဲ့ အရသာသဈတဈမြိုးကို မွညျးစမျးခံစားကွညျ့ကွရအောငျနျော…
ကွာညှို့ ထမငျးစားဇှနျး (၃)ဇှနျး
ပဲပိစပျ ထမငျးစားဇှနျး (၂)ဇှနျး
ငံပွာရညျ ထမငျးစားဇှနျး (၂)ဇှနျး
ဝကျသားလုံးရှမျးခေါကျဆှဲ ပွုလုပျမယျဆိုရငျတော့ …
(၁) ရှမျးခေါကျဆှဲခွောကျကို ရစေိမျထားပွီး ဝကျသားကို နုတျနုတျစငျးထားပါ။ မွပေဲဆံလေးတှကေို မညကျတညကျ ထောငျးထားပါ။
Related Article >>> ခှနျအားပွညျ့စမေယျ့ ခငျြးရိုးရာ ဆာဗူးသီးကို အိမျမှာအလှယျတကူ လုပျစားနိုငျမယျ့နညျးလမျး
(၂) ခငျြးနဲ့ ကွကျသှနျဖွူ ၂မွှာကိုရောထောငျးပွီး ကွကျသားမှုနျ့ ထမငျးစားဇှနျးတဈဝကျခနျ့ ထပျထညျ့ကာ နုတျနုတျစငျးထားတဲ့ ဝကျသားသုံးပုံ နှဈပုံခနျ့နဲ့ရောနယျပေးပါ။
(၃) ကွကျဥတဈလုံးကို ဝကျသားရောနယျထားတဲ့အထဲ ရောမှပွေီး အနတေျောအလုံးလေးတှလေုံးပွီး ပှကျပှကျဆူနတေဲ့ ရနှေေးထဲထညျ့ပွုတျပါ။ (၁၀)မိနဈလောကျပွုတျပွီးရငျတော့ အသားလုံးလေးတှကေို ဆယျယူထားလို့ရပါပွီ။
(၄) ဒယျအိုးတဈလုံးထဲမှာ ကွကျသှနျဖွူနီ ၊ ငရုတျသီးအစိမျးမှုနျ့ရောထညျ့ပွီး ဆီမှေးသတျပေးပါ။ ပွီးရငျတော့ ခရမျးခဉျြသီး(၈)စိတျ စိတျပွီးထညျ့ပါ။
(၅) ခရမျးခဉျြသီးအရညျမပြျောတပြျော အခြိနျလောကျမှာ ဝကျသားသုံးပုံတဈပုံကိုထညျ့ပွီး (၁၀)မိနဈလောကျခကျြပေးပါ။
(၆) (၁၀)မိနဈပွညျ့တဲ့အခါ ပဲပိစပျနဲ့ ငံပွာရညျရောထညျ့ပွီး ဝကျသားကောငျးကောငျးနူးတဲ့အထိ ခကျြပွီးရငျတော့ ရှမျးခေါကျဆှဲအတှကျ အနှဈရပါပွီ။
(၇) ရစေိမျထားတဲ့ ရှမျးခေါကျဆှဲဖတျကို တဈပှဲစာရနှေေးထဲထညျ့ပွုတျပွီး အပြော့အမာ စိတျတိုငျးကပြွီဆိုရငျတော့ ဇလုံတဈခုထဲကိုထညျ့ပါ။
Related Article >>> မိုးအေးအေးထဲမှာ အာပူလြှာပူသုပျခဉျြငံစပျလေး လုပျစားကွမယျ
(၈) အနှဈထမငျးစားဇှနျး(၁)ဇှနျး ၊ ကွာညှို့(၁)ဇှနျး ၊ မွပေဲဆံ(၁)ဇှနျး ၊ အခြိုမှုနျ့အနညျးငယျထညျ့ပွီး ရှမျးခေါကျဆှဲအဖတျတှနေဲ့ ရောမှပေေးပါ။ အခြိုအငံမြှတသှားပွီဆိုရငျတော့ ပွုတျထားတဲ့ ဝကျသားလုံးတှေ ပလုံစီအောငျ စိတျတိုငျးကတြငျပွီး သုံးဆောငျလို့ရပါပွီနျော…
ဝကျသားလုံးလေးတှကေို ကိုကျဝါးလိုကျလို့ ခြိုမွတဲ့အရသာစိမျ့ထှကျလာခြိနျမှာ ရှမျးခေါကျဆှဲလေး ရောစားလိုကျမယျဆိုရငျ ပိုထူးကဲတဲ့အရသာကို တမွမွေ့ခေံ့စားရရှိနိုငျမှာပါ ယောငျးရေ… နောကျထပျလညျး ယောငျးတို့အကွိုကျနဲ့ ထပျတူကစြမေယျ့ အစားအစာလုပျနညျးတှကေို ဝမြှေပေးဦးမှာမို့ ဆကျလကျစောငျ့မြှျောပေးကွပါဦးနျော…..
Tags: Food, meat ball, onion, Pork, Recipe, shan noodle, Tomato
Yin Sandi Ko July 5, 2019
အေးစိမ့်အုံ့မှိုင်းနေတဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ရှူးရှဲပင်လယ်စာထောင်းကို အခိုးပွင့်သွားအောင် ထောင်းစားကြမယ်!!
Yin Sandi Ko June 14, 2019
ခွန်အားပြည့်စေမယ့် ချင်းရိုးရာ ဆာဗူးသီးကို အိမ်မှာအလွယ်တကူ လုပ်စားနိုင်မယ့်နည်းလမ်း
Yin Sandi Ko June 4, 2019
ဝိတ်ထိန်းနေတဲ့ ယောင်းတို့ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ အဆာပြေစားစရာ (၅) မျိုး
Stella May 30, 2019
မြင်တာနဲ့စားချင်စဖွယ် ဖြစ်နေစေမယ့် ထမင်းဘူးလှလှလေးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲ
Yin Sandi Ko May 29, 2019
မိုးအေးအေးမှာ ဇိမ်လေးနဲ့သောက်ရမယ့် ကော်ဖီဆိုတာ ဒီလိုဖျော်ရတာပါ
Stella May 26, 2019